जान्नुहोस् ! यस्तो छ कारण यज्ञमा हवन गर्दा किन स्वाहा भनिन्छ भनेर ?
जनवरी 20, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments यज्ञ, स्वाहा, हवन
यज्ञमा हवन गर्दा किन स्वाहा भनिन्छ ? हिन्दु धर्ममा पूजापाठ र हवन यज्ञको विशेष महत्व छ । कुनै पनि शुभ कार्यमा हवन गर्नु आवश्यक मानिन्छ । हवन गर्दा ‘स्वाहा’ शब्द उच्चारण गरिन्छ । किन यसो गरिएको हो ? आउनुस् यसको चर्चा गरौं । वैदिक कालदेखि नै आहुतिका बेला स्वाहा उच्चारण गरिन्थ्यो । ऋग्वैदिक कालमा मनुष्य र देवताहरूको माध्यमका रूपमा अग्निलाई छानिएको थियो । अग्निको तेजमा सबै कुरा पवित्र हुन्छ र देवताहरूलाई समर्पित वस्तु हवनको अग्निमा चढाउँदा उनीहरूकहाँ पुग्छ भन्ने विश्वास छ । तर स्वाहा भनेपछि मात्र देवताकहाँ सामग्री पुग्न सम्भव हुन्छ । किन्तु यज्ञ वेदीमा हवन गर्ने बेला ‘स्वाहा’ शब्दको उच्चारण गरिन्थ्यो ।
निश्चित रूपमा मंत्र विधान संरचनको आरम्भमा नै यो तथ्यामा विचार गर्न शुरु भएको थियो कि आखिर हवन गरिएको सामग्री कसरी देवतासमक्ष पुर्याउने ? विविध उपायद्वारा कैयौं प्रयास याज्ञिक विधानलाई संचालित गर्न व्यक्त गरियो। अन्ततः अग्निलाई माध्यमको रुपमा सर्वश्रेष्ठ पाइयो भने उपयुक्ततम शब्दको रुपमा ‘स्वाहा’को गठन भयो । वास्तवमा ‘स्वाहा’को अर्थ आफैंमा धेरै रोचक छ । निरुक्तमा स्वाहाको अर्थ हुन्छ सही रीतिबाट पुयाउनु ।
आवश्यक भौगिक पदार्थ प्रिय देवतासम्म पु-याउने कामलाई स्वाहा भनिन्छ । कुनै पनि हवन र अनुष्ठानको उद्देश्य हवन सामग्री देवताले ग्रहण गरून् भन्ने हो । स्वाहा उच्चारण गरेर यज्ञमा भोग चढाउँदा देवताले पाउँछन् । अग्नि र स्वाहाका सम्बन्धमा विभिन्न रोचक पौराणिक कथाहरू उपलब्ध छन् । स्वाहा दक्ष प्रजापतिकी पुत्री थिइन् र उनको विवाह अग्निदेवसँग भएको थियो । अग्निदेवलाई हविष्यवाहक भनी भनिन्छ । अग्निदेव आफ्नी पत्नी स्वाहाको माध्यमले हवन ग्रहण गर्नुहुन्छ र उहाँको माध्यमबाट देवताहरूले हवन सामग्री ग्रहण गर्छन् ।
अग्नि र स्वाहासँग सम्बन्धित पौराणिक आख्यान पनि धेरै रोचक छन्। श्रीमद्भागवत तथा शिव पुराणमा स्वाहासँग सम्बन्धित वर्णन गरिएको छ। यसको अतिरिक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक ग्रन्थमा अग्निको महत्वबारे अनेक रचना गरिएका छन् । स्वाहालाई प्रकृतिको एक कला मानिन्छ र देवताहरूको आग्रह अनुसार उनको विवाह अग्निदेवसँग भएको मान्यता राखिन्छ । केवल उनको माध्यमबाट देवताहरूले हवन सामग्री ग्रहण गर्न सक्छन् भनी भगवान् श्रीकृष्णले स्वाहालाई वरदान दिनुभएको थियो । सबै वैदिक तथा पौराणिक विधान अग्निलाई समर्पित मन्त्रोच्चारण तथा स्वाहाद्वारा हवन सामग्रीलाई देवतासम्म पु-याउने कुरालाई पुष्टि गर्छन् ।
← शास्त्र भन्छ – जान्नुहोस् ! यी ५ कारणहरुले घट्छ मानिसको आयु
जान्नुहोस् ! वास्तुशास्त्र अनुसार के गर्ने र के नगर्ने ? केहि उपयोगी टिप्सहरु →
डिसेम्बर 27, 2016 साइन्स इन्फोटेक 2
जनवरी 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
2 thoughts on “यज्ञमा हवन गर्दा किन स्वाहा भनिन्छ ?”
Pingback:यस्यो छ यज्ञ र हवनमा फरक, जानी राख्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस्